Otu esi eji akwukwo ndi ozo puta | Crafts Na
Irene Gil | | Crafts, Ọrụ nka
Ọ na-abịa Ụbọchị Valentine, oge ebe anyị niile nwere mmekọrịta ịhụnanya, ịnụ ọkụ n'obi izute ndị enyi, ezinụlọ na onye ọlụlụ.
Onweghi ihe mara nma karia inye ihe anyi jiri aka anyi mee, n’ihi nke a taa ewetara m gi a nkuzi iji mee okooko osisi mara mma crepe ndi eji enye ma icho mma.
Ha dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ịme ya ka anyị hụ usoro nzọụkwụ:
1 Akụrụngwa iji mee okooko osisi:
2 Ntuziaka iji mee okooko osisi
2.1 Kwụpụ 1:
2.2 Kwụpụ 2:
2.3 Kwụpụ 3:
2.4 Kwụpụ 4:
2.5 Kwụpụ 5:
2.6 Kwụpụ 6:
2.7 Kwụpụ 7:
3 akwụkwọ ifuru
Akụrụngwa iji mee okooko osisi:
Akwụkwọ Crepe na agba achọrọ, ahọrọwo m pink, ebe ọ na-akpọrọ anyị gaa na ihunanya, ezigbo maka ụbọchị ịhụnanya. Ọ bụrụ na ịnweghị akwụkwọ crepe, ebe a ị nwere ike ịzụta ya na agba nke kacha amasị gị.
Mpe mpe akwa na agba agba.
Bọtịnụ, mkpa na gluu ọkacha mma na silicone.
Ntuziaka iji mee okooko osisi
Ihe mbụ anyị na-eme bụ bupute n'ámá, ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche.
Ka anyị na-enwekwu oyi akwa, otú ahụ ka ifuru anyị ga na-ebu agha.
N'otu njedebe nke square, anyị na-amalite n'ogige atụrụ dị ka zig zag, na-edobe akwa niile.
Ọ kwesịrị ịdị ka anyị na-ahụ na foto dị n'okpuru.
Anyị na-ekpuchi waya na teepu na-acha akwụkwọ ndụ, na-eji gluu eme ka ọ ghara ịkwatu anyị.
Ogo nke waya ahụ dabere na okooko osisi anyị, ọ kwesịrị ịdị nha.
Ugbu a, anyị na-etinye waya ahụ n'ime ọkara nke akwụkwọ ahụ, na ịpịsi ike, dị ka anyị na-ahụ na foto dị n'okpuru.
Anyị na-amalite imeghe petals, n'ihi na ọ ga-ezuru ya kewaa nke oma onye ọ bụla oyi akwa nke akwụkwọ, na-agbalị iji nweta a gburugburu udi.
Anyị kwesịrị ịdị ka onyinyo dị n'okpuru:
Anyị malitere akụkụ funniest, nke bụ iji echiche ahụ, chọọ mma.
Na nke a, ejiri m bọtịnụ mee etiti etiti ifuru ahụ.
Mgbe ahụkwa, ha nwere ike icho mma na ribbons na bọtịnụ.
Nke a bụ otú ọ ga - adị:
Site na okooko osisi ndị a, ha nwere ike ime corsages, icho mma tebụl ma nye dị ka onyinye.
3 Echiche iji mee okooko osisi maka CRAFTS gị
I nwekwara ike ike dị iche iche akwụkwọ ifuru na otu usoro a site na igbanwe ịkpụ nke njedebe nke akwụkwọ nkwado. Na ihe na-esonụ oyiyi m na-egosi gị atọ dị iche iche he ga-enye a dị iche iche imecha gị okooko osisi.
Bee ngwụcha ya na elu ka akụkụ ahụ pịrị ọnụ pụta, ọ bụrụ na ị ga - eme obere mmebi ị ga - enweta carnation, ma ọ bụrụ na ị hapụ ha ka eriri gị ga - adị ifuru.
Cheta na nnukwu uzo, o bu na ka ibu crepe akwụkwọ okooko osisi, na ebe ị na-anọkarị, ị ga-ebuwanye ibu. A ghaghi iburu nke a n'uche mgbe ị na-eke ha.
Enwere m olile anya na ị ga-enwe ọ andụ ma anyị ga-ahụkwu echiche oge ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts na ihe » Ọrụ nka » Otu esi eme okooko osisi site na akwukwo crepe
Emerem 2017 dijo
Enwere m mmasị n'echiche a, daalụ
hello daalụ nke ukwuu, ọ dị mfe ma dịkwa irè
Dị mfe ma mara mma, daalụ.
Ọrụ ụmụaka: Mepụta okpu nke China gị
Etu esi eme akwa nkpu igodo ya na yar yar eji eme akwa T-shirt